17:17 Iyure yesipili: Iingxabano ziLindelwe - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Iiyure zesipili, ezinje ngo-17:17, ziphakamisa imibuzo emininzi kwaye zivuselele iimfihlakalo ezininzi. Akudla ngokuwabona, nto leyo ewenza angaqondakali kwaye enze uvakalelo lokuba asitsalela kuwo. Iyure nganye yesipili inentsingiselo kunye nomyalezo ovela kwingelosi yethu engumgadi. Yiyo loo nto akufanele uyihoye. Sityhila yonke into malunga neyure yesipili ye-17:17 kunye nokuba iya kubuchaphazela njani ubomi bakho.
Ukubona i-17:17iyure yesipiliibonisa ukuba umoya usemoyeni kwaye umoya uyaqhuma.
Ukwazi intsingiselo emva kweyure yesipili kukuvumela ukuba uqonde yakho ingelosi yokukhokhela Umyalezo kwaye ke ngoko ujonge ubomi bakho kwicala elahlukileyo kwaye ufumane ukuzithemba ngakumbi… konke kulwazi lokuba ingelosi yakho engumgadi ikhona ikujongile.
17:17 Intsingiselo yeyure yesipili: Lumkela iingxoxo
Uyabhuda ngaphakathi. Ixesha le-17:17 likwenza wazi ukuba uneeprojekthi ezininzi kunye nezinto ojolise kuzo emsebenzini. Wena u amandla okudala ; Intelekelelo yakho izele kumthamo kwaye awucwangcisi ukucotha nangaliphi na ixesha kungekudala. Konke kulungile kwaye kulungile, kodwa, ugxile kakhulu kwiinjongo zakho, uyathanda ungalihoyi iqabane lakho .
Yiyo loo nto 17:17 ikwalixesha apho iingxabano zenzeka neqabane lakho . Ukungaqondi kakuhle kwaye ukuphoxeka zixhaphakile.
17:17 Iyure yesipili ifuzisela:
' Ungamandla okudala; Ingqondo yakho izele kude kube sekupheleni...
17:17 Iyure yesipili, uya usomelela ngokomelela
Xa ubona ixesha le-17: 17, khumbula ukuba ingelosi yakho yomgcini iyavuyisana nawe amandla amatsha angaphakathi . Usenokuba ugxile kwaye usebenze kuwe, ngokucamngca okanye ukuhlaziya ingqondo. Ngolwazi olukhulu lwamandla akho kunye nobuthathaka bakho, ngoku uyakwazi ziphephe iimvakalelo zokungazithembi ibikade ikubambezela. Iyure yesipili 17:17 nayo ibhekisa ku a ubomi bangaphambili , amava exesha elidlulileyo. Intelekelelo yakho inxulunyaniswe noluvo lwenkumbulo.
17:17 , elifuzisela inani lama-34 kubhalo-manani
Ufumana iintshukumo ezikhuthazayo. Nangona kukho iingxaki eziphathekayo, uziva uzithembile kwaye ulungele ukuphumelela. Kuphela ngamaxhala ambalwa eemvakalelo aya kungena endleleni yakho. Musa ukudimazeka, kodwa cela umngeni ngokwakho ukuba kuyafuneka.
Iinyani zeSagittarius: Nazi ezona 15 zimangalisayo